CBL-Mariner: Maitiro ekuisa uye Kuedza iyo Microsoft Linux System | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakaburitsa mazuva mashoma apfuura iyo Linux-based operating system yaunogona kurodha pasi nekumisikidza mahara senge chero imwe distro. Nekudaro, kuvhurwa hakuna kuziviswa nehukuru fanfare, asi zvaive zvakangwara, pasina kana ruzha ... Zita rake anonzi CBL-Mariner (Common Base Linux Mariner) uye pano iwe unodzidza nhanho nhanho maitiro ekurodha pasi nekuimisa (mune chairo muchina).
Chokwadi ndechekuti kambani yeRedmond kushamisika panguva iyoyo pamwe neyakavhurwa sosi inoburitswa, kana nekutengwa kweGitHub, pamwe nekubatanidzwa kweiyo Linux subsystem muWindows yayo (WSL), kana nerutsigiro rweLinux yezvimwe zvezvirongwa zvayo, pamwe neizvo zvinoshanda system yemidziyo yemidziyo zvakare yakavakirwa paLinux uye inonzi SONiC ...
1 Chii chinonzi CBL-Mariner?
2 Maitiro ekudownloadsa nekuisa CBL-Mariner pamushini chaiwo
2.1 1-Dhawunirodha uye gadzira iyo ISO
2.2 2-Isa CBL-Mariner muVM
2.3 3-Isa sisitimu muMV
Chii chinonzi CBL-Mariner?
Sezvinoratidzwawo mu GitHub peji, izere Linux inoshanda sisitimu yakagadzirwa uye inochengetwa neMicrosoft pachayo. Chinangwa chayo hachisi chekungove chimwe chakajairika-chinangwa GNU / Linux kugovera, asi kuti ushumire chimwe chinangwa. Uye ndeyekuti iyo Windows kambani inochida sehwaro hweWSL2, ndiko kuti, iyo nyowani Linux subsystem yeWindows 11 uye Windows 365 iyo graphical application inogona zvakare kumhanyisa.
CBL-Mariner yakambovapo, uye yanga ichishandiswa mukati neMicrosoft kune kwayo zvivakwa zve Gore rakasviba. Pamusoro pezvo, kambani yeRedmond yanga ichishanda zvakanyanya pakuchengetedzwa kwekushomeka kweiyi sisitimu inoshanda, ine kernel yakaoma, yakasainwa inogadziriswa, ASLR, compiler-based hardening, tamper-proof marejista, uye zvimwe zvakawanda maficha.
Inosanganisira diki seti yemapakeji ekutanga. Iyo inozivikanwa zvakare kushandisa RPM chikamu. Kunyanya, sisitimu yaro yekubatanidza inobvumidza kuburitsa yakaparadzana .rpm yakavakirwa paSPEC mafaera uye sosi kodhi. Zvakare mifananidzo yeiyo monolithic system inogadzirwa neiyo rpm-ostree toolkit. Kana zviri zvekuvandudzwa, vanogona kunyorera kune chaiwo mapakeji kana iyo sisitimu yese.
Zvese matekinoroji uye kodhi yakagadzirwa neMicorosoft yeCBL-Mariner yakavhurwa sosi, uye yakaburitswa pasi peMIT rezinesi.
Maitiro ekudownloadsa nekuisa CBL-Mariner pamushini chaiwo
Kutsanangura nhanho nhanho kuti unogona sei dhawunirodha uye gadza CBL-Mariner Kuiyedza ini ndiri kuzoshandisa iyo Ubuntu kugovera uye VirtualBox virtualization software sehwaro. Izvo zvinogona kuitwa mune chero kumwe kugovera uye nemamwe software kune chaiwo michina kana iwe uchida. Matanho acho achave akafanana chaizvo mune chero mamiriro.
1-Dhawunirodha uye gadzira iyo ISO
Chinhu chekutanga kuita kurodha pasi kubva kuCBL-Mariner repository uye wozozvigadzira isu mufananidzo weIO, sezvo pasati pave nemufananidzo wekurodha pasi zvakananga. Kuti uite izvi, iwe unoda akateedzana akaiswa mapakeji, mazhinji acho ane chokwadi chekuti unotova nawo, asi kana zvadaro, mhanya unotevera kuraira:
Paunenge uchinge uine software inodiwa yaiswa, ikozvino unofanirwa Clone iyo repository kubva kuGitHub neiyo CBL-Mariner kodhi yemuno, ndokuti, pakombuta yedu. Uye izvi zvinoitwa sekuziva kwako kare.
Kamwe ikadzorwa uye ikawana dhairekitori iro rakagadzirwa munharaunda, chinotevera chinhu kuwana yakatarwa dhairekitori kune gadzira iyo ISO kubva ipapo kutanga:
Kana maitiro apera, iwe unenge uine iyo ISO faira inowanikwa mune iyo dhairekitori ../out/images/full/.
2-Isa CBL-Mariner muVM
Iye zvino zvaunenge uine iyo ISO mufananidzo, iwe unogona gadza CBL-Mariner pamushini chaiwo. Kuti uite izvi, unogona kushandisa Oracle VirtualBox, iyo yemahara. Paunenge iwe waisa iyo inodikanwa software yekuita (iwe unogona kurodha pasi nekumisikidza kubva kune icho chinongedzo kana zvakare kubva kuzororo redistro yako, iko iko kunowanikwawo), zvinotevera kutevera matanho aya:
Dzvanya bhatani Nyowani kugadzira VM nyowani.
Zvino tanga iyo chaiyo muchina wekugadzira wizard. Isa zita raunoda uye murudzi sarudza "Linux", uye vhezheni "Imwe Linux (64-bit)". Uye pfuurira mberi.
Ipapo achakubvunza zvinodiwa yehurongwa hwakagadzirwa. YeCBL-Mariner unofanirwa kumisikidza imwe 1 CPU, 1GB ye RAM, uye 8GB yediski. Kana iwe ukashandisa zvishoma zvishoma RAM uye CPU zvinoshanda zvirinani, saka chingave zano rakanaka. Enda kune inotevera kusvikira wapedza iyo wizard.
Mushini chaiwo watogadzirwa. Iye zvino zvawave kudzoka pane yakakosha VirtualBox skrini, unogona kubaya-kurudyi mukova unowoneka nezita rawakapa wobva wasarudza Setup pane menyu. Iwe unogona zvakare kusarudza iyo yekupinda uye tinya pane yepamusoro Zvirongwa bhatani.
Enda ku Self Storage, uye kubva ipapo pane icon yeiyo optical disk (Empty) iwe unofanirwa kudzvanya paOptical Drive uye sarudza "Sarudza diski faira" kurodha iyo ISO mufananidzo. Uye mubrowser ichaonekwa, sarudza paunenge uine iyo ISO iyo yawakagadzira mune yakapfuura nhanho.
Inguva yeku Tanga iyo chaiyo muchina pamwe neCBL-Mariner.
3-Isa sisitimu muMV
Paunenge iwe watangisa iyo chaiyo muchina, inotanga kumusoro uye mushure menguva diki inokuratidza menyu kune kuisirwa. Matanho aunofanira kutevera ndeaya:
Sarudza sarudzo "Graphical Installer" yekumisikidza graphical. Iko kune zvekare dzimwe sarudzo dzescript mode, asi graphic iri nani. Uye kana uchinge wasarudzwa, tinya Next. [iwe unofanirwa kufamba-famba kuburikidza nemenyu nemiseve yekhibhodi uye ENTER kusarudza]
Iye zvino iwe uchaona iyo inosimudza yakafanana chaizvo nechero yeimwe distro. Mune iyo Yekuisa Type menyu: unofanirwa kusarudza «CBL-Mariner Yakazara » yekumisikidza kuzere. Chero zvazvingaitika, zvese zviri zvizere neCore, sezvo zvisinganyatso sanganisira mapakeji, ichave ichikurumidza.
Iyo inotevera skrini ndeye marezinesi mazwi ekugamuchira.
Kwozouya mutevedzeri hard drive kupatsanura. Ikoko iwe unofanirwa kugadzira izvo zvakakosha zvikamu kana kusiya izvo zvinouya nekutadza.
Tendeuka kuti usarudze zita remubati, pamwe neiyo Username uye password. Unogona kuisa chero chaunoda, asi chiyeuke.
CBL-Mariner ikozvino inotanga iyo chaiyo kuisirwa. Ndichatanga ku gadza mapakeji. Uye kana zvapera, tangazve iyo chaiyo muchina.
Paunotanga iwe uchaona iyo Login, kwaunofanirwa kuisa dhata rekupinda (zita uye password).
Ya unogona kushandisa CBL-Mariner sezvaungaita neyako yemuno distro. Uye hongu, zvinosuruvarisa zvinotanga mumavara mamiriro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CBL-Mariner: Maitiro ekuisa uye Kuedza Microsoft Linux System
iri kupa kukanganisa kuraira uye kuwanikwa na linha
sudo gadzira iso KUZVAKADZIDZIRA_TOOLS = uye KUVAKA ZVAKAITIKA_PACKAGES = n CONFIG_FILE =. / imageconfigs / full.json
sudo: gadzira: raira haina kuwanikwa
Pindura kune benguiguy
Edza kumhanya kugadzira pasina Sudo
haishande pamwe kana pasina Sudo ..
kukanganisa nekuvaka iso:
enda: gonum.org/v1/gonum@v0.6.2: isingazivikanwe kupinza nzira "gonum.org/v1/gonum" (https kutora: Tora https://gonum.org/v1/gonum?go-get=1: Haina Kuitwa)
enda: kukanganisa kurodha module zvinodiwa
chero mhinduro yeiyo?